၂၀၁၉ခုနှစ်၊ မတ်လ(၄)ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းမှ စတင်ကာ မက်စ်မြန်မာကုမ္ပဏီများ အုပ်စုတွင် Internship ဆင်းကြမည့် MBA ကျောင်းသား/သူများကို Group CEO ဒေါက်တာသောင်းဟန်က ကြိုဆိုသြဝါဒစကား ပြောကြား – Max Myanmar Group
၂၀၁၉ခုနှစ်၊ မတ်လ(၄)ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းမှ စတင်ကာ မက်စ်မြန်မာကုမ္ပဏီများအုပ်စုတွင် Internship ဆင်းကြမည့် MBA ကျောင်းသား/သူများကို Group CEOဒေါက်တာသောင်းဟန်က ကြိုဆိုသြဝါဒစကား ပြောကြားခဲ့ပြီး လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့်ကိစ္စရပ်များ၊ အလေးထား လေ့လာသင်ယူသင့်သည့် အကြောင်းအရာများကို ရှင်းလင်းပြောကြားပေးခဲ့ပါသည်။ ထို့အတူ Group HR Director ဒေါက်တာဉာဏ်တိုးကဖြည့်စွက် မှာကြားခဲ့ကာ သက်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီခွဲအလိုက် HR တာဝန်ခံများနှင့်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။ ရန်ကုန်စီးပွားရေး တက္ကသိုလ်တွင် Master of BusinessAdministration (MBA – Batch 24) ပထမနှစ်တက်ရောက် ဖြေဆိုထားသည့်ကျောင်းသား/သူ စုစုပေါင်း (၇)ဦးတို့သည် မက်စ်မြန်မာ ကုမ္ပဏီအုပ်စု၏ကုမ္ပဏီခွဲများတွင် (၃)လကြာ Internship ဆင်းကြမည်ဖြစ်ကာ အဆိုပါကျောင်းသား/သူများ လုပ်ငန်းခွင် လက်တွေ့လေ့လာရေးနှင့် စာတမ်းပြုစုနိုင်ရေးတစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ ပံ့ပိုးကူညီပေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
Older PostMax Myanmar Group of Companies Management Meeting
Newer PostMax Myanmar Group of Companies နှင့် AYA Financial Group ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇော်ဇော်သည် ချက်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေး ဒုတိယဝန်ကြီး H.E. Mr. Martin Tlapa နှင့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ချက်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Jaroslav Doleček တို့အဖွဲ့နှင့် တွေ့ဆုံ